Mpanamboatra vokatra mahaliana Eco - Orinasa mpamatsy vokatra mpamatsy entana any Shina
Kaontenera sakafo mora simba
Shanghai COPAK dia natsangana tamin'ny taona 2010. Ary ny vokatray lehibe dia ny kaopy PET, tavoahangy PET ary fitoeran-tsakafo PET. Ankoatr'izay dia namokatra vokatra PLA ihany koa izahay. Fa andro ankehitriny, ny vokatra Eco namana dia tena ilaina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Noho izanykaontenera sakafo biodegradable dia omenay. Kopy vita amin'ny taratasy Kraft, kaontenera voajanahary azo avy amin'ny crane siramamy na zana-katsaka sns.
Teny lakile Product Tavoahangy salady taratasy; lovia taratasy Kraft; lovia taratasy salady; lovia taratasy salady kraft
endri-javatra PE Coating; Fonosana PLA; Tavoahangy taratasy vita amin'ny aluminium
pirinty natao tamin'ny Matt Lamination / embossing / Glossy Lamination / foil volamena
Ora nanomezana 15-25andro
Fonosana entana 50 pcs / kitapo, 10bag / CTN
Seranan-tsambo fandefasana Shanghai, Ningbo
Fe-potoana fandoavana 30% T / T mialoha, mandanjalanja raha adika BL.
Vilia taratasy manokana
Vilia taratasy manokana vita amin'ny taratasy sy ny PE / PLA / aluminium coating liner. Ny lovia taratasy ao Copak dia azo amboarina amin'ny habe, volume, endrika, loko ary fanontana logo samihafa. Ny lovia vita amin'ny taratasy manokana dia natao hamonosana ny Vary, ny paty, ny sakafo maraina, ny yaourt, ny volo, ny anjara, ny savony mafana, ny lovia mafana sns.
Fanohanana COPAK kaopy PLA vita pirinty manokana.Ny mpanjifa dia afaka manamboatra ny kaopiny amin'ny endriny, loko, volume, logo vita pirinty ary antsipiriany hafa. COPAK dia manana injeniera efa za-draharaha, milina famolavolana bobongolo, mpiasa mahay ary milina fanontana UV-écran. Ny zavatra takinao rehetra dia azo voky ao amin'ny COPAK.
Kraft taratasy. Antsoina koa hoe lovia taratasy azo atsipy, vilia taratasy na fitoeran-tsakafo Biodegradable, vita amin'ny taratasy sy plastika PLA / PE ary firakotra aluminium. Izy io dia natao ho endrika boribory sy COPAK vilia taratasy kraft dia mety amin'ny lasopy, laoka, paty, salady, voamadinika nahandro, ary koa ho an'ny gilasy, voanjo, voankazo maina ary vokatra hafa. Manohitra ny hatsiaka ary tsy simba. Azo atao ny mametraka pirinty misy marika.
Loza vita amin'ny taratasy misy sarony
Tavoahangy taratasy vita amin'ny compostable misy sarony - 100% Biodegradable. Ny vilia fandraisam-peon'i Shanghai COPAK dia tsy voatery atao miaraka amina boky sy habe samihafa. Ny vilia fitaizanay dia vita amin'ny taratasy Kraft na taratasy fotsy. Ny roa amin'izy ireo dia azo zahana amin'ny PE / PLA / Aluminium coating. Raha ny amin'ny sarony dia azonao atao ny misafidy takelaka taratasy, fonosana pp, fonosana OPS na rakotra PET.
Ankoatry ny kaopy misy zava-pisotro PET, fitoeran-tsakafo ary tavoahangy misy PET, dia manam-pahaizana momba ny Compostable koa ny COPAK PLA tavoahangy. Afaka mamolavola, mamolavola vokatra vaovao, vokatra mahazatra ary varotra iraisam-pirenena isikaTavoahangy PLA miaraka amin'ny traikefa amin'ny fahaiza-manao. Ny famokarana dia manomboka amin'ny fametrahana ny famolavolana vokatra, ny fanaovana bobongolo, ny bobongolo, ny famolahana ny tsindrona, ny fanontana, ny fanodinana ny marika ary ny entana sy ny fandefasana. Satroka PLA ho an'nyTavoahangy PLA safidy isan-karazany ihany koa.
Shanghai COPAK industry Co., Ltd. dia manolotra Biodegradable kalitao premium andehilahyA tavoahangy any Sina. Ny tavoahangy plastika Plos-latabatra pla-antsika dia malaza be amin'ireo mpanafatra sy mpizara manerantany. Any Chine no misy azy ary mifantoka amin'ny famokarana sy fanondranana ny tavoahangy PLA fotsiny, COPAK dia afaka mamokatra vokatra avo lenta ary manome tolotra varotra iraisam-pirenena matihanina. Izahay no mpamatsy tsara indrindra Tavoahangy PLA any Sina.
Ao amin'ny COPAK, ny vilia fitaizanay dia misy safidy maro amin'ny habeny, amin'ny habetsany ary amin'ny fampiasana azy. Izy ireo dia microwavable, manaporofo ary tsy mahazaka menaka. COPAK’s lovia taratasy dia misy fonosana PE tokana, firakotra PE avo roa heny, firakotra PLA misy loko fotsy, loko Kraft, vilia taratasy vita amin'ny foil aluminium ary lovia taratasy vita amin'ny rindrina ripple.
Ireto lovia taratasy ireto dia mety amin'ny salady, lasopy, legioma, voankazo ary karazan-tsakafo hafa dia mety amin'ny fanangonana karazana sakafo mafana na mangatsiaka. Ho an'ny antsipirian'ny boaty taratasy Saladinay aryvilia taratasy lasopy dia toy izao manaraka izao,
Mpanamboatra tavoahangy PLA
Shanghai COPAK Industry Co., LTD, natsangana tamin'ny 2010, miaraka amin'ny biraon'ny varotra any Shanghai sy ny orinasa any Zhejiang. COPAK dia voalohany natsangana ho mpamatsy kitapo plastika sy sarimihetsika fonosana sakafo. Tamin'ny 2015, nanomboka ny orinasan-tsakafon'ny PET sy tavoahangy PET izahay. Ankehitriny, ny vokatra maitso dia misarika ny sain'ny olona. Copak dia afaka mampiasa fitaovana ara-tontolo iainana misimisy kokoa, toy ny RPET sy PLA. COPAK koa izaoMpanamboatra tavoahangy PLA ary mpanamboatra kaopy PLA.
Shanghai COPAK Industry CO., LTD monina any Shanghai, Sina, dia orinasa matihanina amin'ny fonosana sakafo toy ny kaopy zava-pisotro, tavoahangy misy ranom-boankazo, kaontenera sakafo, kaontenera salady misy fitaovana PET sy PLA.
Ny firesahana ny vokatra PLA an'ny COPAK dia vita amin'ny fary fary, tanimbary. Ny vokatra PLA dia misyKaopy PLA, Fitoeran-tsakafo PLA, tavoahangy PLA. Ampiasain'ny fivarotana lehibe, fivarotana haingam-pandeha haingana, bara, fivarotana ranom-boankazo izy ireo ary toy izany hatrany amin'ny famonosana zava-pisotro mangatsiaka toy ny zava-pisotro, ranom-boankazo, voasarimakirana, ronono, dite, kafe, gilasy sns.